I-Guesthouse de Middelbeek - I-Airbnb
I-Guesthouse de Middelbeek
Yonwabela iindawo ezisemaphandleni kwintlambo entle i-IJssel! Phakathi kweZutphen kunye neDeventer, indawo yethu ineendlela ezininzi ezintle zokuhamba ngebhayisekile kunye neendlela zokunyuka intaba. Xa sihlala, uza kuhlala kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex etofotofo enetreyini evulekileyo, igadi enkulu kunye namanzi amancinci (intlanzi) ane-storks.
Indlu yethu engasemva iyafumaneka ukuba iqeshwe ubuncinane iintsuku eziyi-2.
Iindleko ezongezelelweyo ezinyanzelekileyo: Irhafu yabakhenkethi 1.30 pp/pn ekufuneka ilungiswe ngoko nangoko.
Indlu yethu engasemva ikwicala lasekhohlo lefama yethu kwaye inendawo yayo yokupaka nebhayisekile etshixekayo apho kukho namathuba okuhlawulisa ngeebhayisekile.
Indawo yokuhlala ayibalungelanga abantu abasebenzisa isitulo esinamavili nabantu abanengxaki yokuhamba.
Ikhitshi linefriji, i-microwave edibeneyo, isitovu, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokwenza ikofu, iketile nazo zonke izinto ezifunekayo ekhitshini. Kwakhona ikofu,iti, iswekile, ubisi, ioyile kunye nemifuno ziyafumaneka. Ukongezelela, kukho i-smart TV enamajelo amaninzi.
Igumbi lokuhlambela nendlu yangasese (eyahlukanisiweyo) inento eyenza kufudumale phantsi. Iitawuli nezinto zekhitshi ziyafumaneka kwisitokhwe esaneleyo.
Ngaphandle kwebhedi eyisofa ekhitshini, zonke iibhedi zenziwe zaza zalungela ukusetyenziswa xa kufikwa.
4.90 · Izimvo eziyi-159
Izixeko zaseDeventer (iikhilomitha eziyi-13) kunye neZutphen (iikhilomitha eziyi-6) zinokufikelelwa kwindlela entle yokuhamba ngebhayisekile kwimizuzu eyi-40 ukuya kweyi-20 ngokulandelelana, nazi iidilesi ezintle zokuthenga kunye neziganeko ezintle ezifana neDickensfestijn, iBuchmarkt, iDeventer op Stelten kunye neBrocantemarkt.
I-Sauna Bussloo (iikhilomitha eziyi-7) kunye neMyuziyam i-More Gorssel (iikhilomitha eziyi-14) nayo inokufikelelwa ngebhayisekile i-IJssel kwimizuzu eyi-30.
Sihlala kwelinye icala lefama.
Zive ukhululekile ukuyeka ukubuza imibuzo okanye amacebiso ngezinto ezonwabisayo onokuzenza ezikufutshane.